Shaki laga muujiyay hannaanka dib u celinta qaxootiga Rohingya - BBC News Somali
Shaki laga muujiyay hannaanka dib u celinta qaxootiga Rohingya
Image caption Boqolaal qof oo qowmiyadda Rohingya ah ayaa ka soo qaxay Myanmar.
Xubin sare oo ka tirsan hay'adda u qaabilsan Qaramada Midoobay arrimaha qaxootiga ayaa sheegay in uu shaki ka qabo in ay hirgali karto iyo in kale jadwalka dib u celinta qaxootiga Rohingya ee loogu celinayo dalka Myanmar.
Dib u celintan ayaa bilaabaneysa bisha Janaayo sida ay ku heshiiyeen dowladda Bangladesh iyo Myanmar, balse sarkaal ka tirsan hay'adda Qaramada Midobay oo lagu magacaabo Volker Turk oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay in weli loo baahanyahay in la dhiso kalsooni buuxda oo dadkaasi dib loogu celin karo.
Sida in dib u dhis lagu sameeyo deegaanadii la burburiyay iyo in loo saamaxo shaqaalaha hay'addaha gargaarka in ay galaan gobolka Rakhine ee la sheegayo in ay ka dhaceen tacaddiyo ka dhan ah aadanaha.
Sawirrada Muslimiinta Rohingya ee ka cararaya Myanmar
Sarkaalka ayaa sidoo kale sheegay in ay weli ka wada hadlayaan dowladda Myanmar in hay'addaha gargaarka loo ogolaado gelitaanka gobolkaasi.
Macron: Rohingya waa la xasuuqay.